Punta Kana - Izvo zvakakosha zvinhu zvekuita nekuona | Absolut Travel
Zvinhu zvakakosha zvekuita uye kuona parwendo rwako kuenda kuPunta Cana
Hazvina maturo kutaura, Punta Cana ndiyo imwe yenzvimbo dzinodiwa zvakanyanya. Nekuti nekungotaura zita rayo, tinoona kuti mahombekombe iparadhiso inotsvakwa neruzhinji rwevashanyi, asi ichokwadi kuti pamusoro pekunakidzwa iwo makona ezuva, jecha nemvura yeturquoise, Rwendo rwekuPunta Cana runotisiya tiine zvinhu zvisingaperi zvokuona.Uchazvishaya here?
Pamwe une pfungwa Nakidzwa nemamwe mahombekombe ayo anonakidza, uye zvechokwadi chimwe chezvakakosha pakati pePunta Cana zororo.. Asi sezvo urikunakidzwa nemazuva ekurega, une dzimwe sarudzo dzauchazodawo. Kana usingazive pekutangira, usazvinetse, takakuitira basa. Usati wadzima zvachose, yeuka kusarudza a ndege pamwe nehotera Punta Cana. Sei? Nekuti iwe uchaenda nekuchengetedzeka uye nyaradzo yekuve nezvose zvakavharwa zvakanaka kana kusungwa. Zvino hongu, kugamuchirwa kana kugamuchirwa kuzororo rako!
1 Ronga rwendo rwako kuenda kuPunta Kana uine zvese-inosanganisirwa pazororo pasuru
2 Rwendo rwekutanga rwakakurudzirwa: Los Haitises National Park
3 Kushanya kuIsla Saona
4 Diving muCatalina Island
5 Santo Domingo, kushanya kwakanyanya kwetsika
6 Iwo akanakisa zviitiko zvaunogona kudzidzira muPunta Kana
Ronga rwendo rwako kuenda kuPunta Kana uine zvese-inosanganisirwa pazororo pasuru
Danho rekutanga rekukwanisa kunakidzwa zvakanyanya kupfuura nakare kose kusarudza zororo rinosanganisira rePunta Cana. Nekuti chete ipapo tinoziva kuti isu tine chirongwa chekugara chinosanganisira masevhisi ese. Saka neiyi nzira, iwe unozongo tarisa pakunakirwa zvese zviitwa zvinokufadza zvakanyanya uye uzviregedze uende nekamwe nhanho yakasununguka, usinganetseki kuti uchadyepi kana rinhi. Chokwadi, mune zvimwe zviitiko Kana tichitaura nezvemahotera muPunta Cana, tinofanira kutaura kunyaradza kukuru kwatichawana mavari. Izvi zvinoreva kuti pachave nemazuva ausingafanirwe kubuda, nekuti uchawana zvese zvawanga uchida.
Ehe, pakugadzira hotera, isu tinofanirwa kufunga nezve imwe yezvinonyanya kudiwa sarudzo inotarisa pakubhururuka pamwe nehotera yePunta Cana. Pfungwa yakakwana nekuti isu tichavharawo maviri ematanho akakosha tisati tabva parwendo. Nenzira iyi, tinogona kuwana zvinopihwa zvinogara zvichigamuchirwa.
Rwendo rwekutanga rwakakurudzirwa: Los Haitises National Park
Isu takatochengeta rwendo rwedu rwekuPunta Kana, saka kana tangogara, mutambo unotanga. Chiitiko chinotanga neimwe yenzvimbo dzekutanga kushanyira. Iyi ndiyo National Park iri muBay yeSamaná. Iwe unonakidzwa nenzvimbo iri kure nenzvimbo dzese dzekutandarira munzvimbo iyi. Mariri munozowana inonzi 'mogotes' inova rudzi rwenzvimbo dzakakwirira kana kuti nzvimbo dzakakwirira dzakaumbwa nemasikirwo. Iwe unogona kusvika negungwa uye uwane akasiyana mapako kuti nzvimbo yakaita sedzimba idzi, izere nezvakavanzika asi yakanaka kwazvo.
Kushanya kuIsla Saona
Ndiyo imwe yeanonyanya kudiwa mafambiro uye chikonzero ndechekuti ine mabhichi akanaka akazara nemiti yemichindwe, asi kwete izvozvo chete, asi zvakare anoperekedzwa nemakorari ematombo. Hazvigoneki kuti mahotera ari muPunta Cana aite kuti isanganiswe mumapakeji anonyanya kukurudzirwa kana nguva dzekuzorora. Ikoko uchawana Mano Juan, musha wakanyarara zvikuru wokuredza., iyo ichakukunda, nekuda kwedzimba dzayo dzine mavara uye nekuva nzvimbo tsvene yekamba.
Diving muCatalina Island
Chimwe chezvitsuwa zvaunogona kushanyirawo ndeichi. Akanzi Catalina nekuti ndiwo akamutumidza zita raChristopher Columbus muna 1494. Ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanya uye mairi unogona kutakurwa nezviitiko zvakaita sedhivha. Chinogara chiri chinhu chakajairika munzvimbo dzakadai dzakakurumbira. Saka, mushure mekufamba uchitenderera chitsuwa, hapana chakafanana nekusarudza kurovedza muviri kudiki. Iwe uchawira murudo nemaonero ayo azere nezvisikwa.
Santo Domingo, kushanya kwakanyanya kwetsika
Kana rimwe zuva ukamuka mangwanani uye uchida kuita rwendo rwetsika, hapana chakafanana nekuenda kuSanto Domingo. Kubva kuPunta Kana kunotora anenge maawa matatu nemotokari. Asi zvichave zvakakosha, uye zvakawanda. Sezvo iri rimwe remaguta ekare muCaribbean yese. Iyo ine yakakomberedzwa nhoroondo yenzvimbo uye zvakare zvivakwa zvinotangira kubva muzana ramakore reXNUMX. Zvakare munzvimbo ino unogona kunakidzwa nekutanga kathedral uye castle iyo America yaive nayo. Hazvishamisi kuti iWorld Heritage Site
Iwo akanakisa zviitiko zvaunogona kudzidzira muPunta Kana
Munzvimbo yega yega yemahombekombe, ayo akanyanya kuwanda sezvatakambotaura, hauzogara uchitsva nezuva kana kugeza. Saka iwe unogona kuisa nguva mune zvakanyanya kukosha zviitiko. Tataura zvekudhibha asi Isu hatikanganwewo kupinda munzvimbo dzine jecha pane quad kana kutasva bhiza. Chii chaungade? Zvichida kukwanisa kubhururuka pamusoro penzvimbo kana kudzidzira kusefa. Pasina kupokana, kune sarudzo kune yega yega yega yekufarira. Bet pazororo rekurota uye usazvinetse nezvehomwe yako nekuti Punta Cana ndege plus hotera inogona kuenda pamwe chete, mupakiti uye nekukuchengetera pini yakanaka. Tiri kuenda kunorongedza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zvinhu zvakakosha zvekuita uye kuona parwendo rwako kuenda kuPunta Cana
Kushanyira Sri Lanka: vashanyi vekuSpain vanoda Visa here?